टाउको दुख्छ ? कतै ब्रेन ट्यूमर भएको त छैन ? | Hamro Doctor News
टाउको दुख्छ ? कतै ब्रेन ट्यूमर भएको त छैन ?
ब्रेन ट्यूमरको बारेमा धेरै मानिस जानकार छन् । नेपालमा ब्रेन ट्यूमरका बिरामी धेरै छन् । ब्रेन ट्यूमरकै कारण धेरैको मृत्यु समेत भएको छ । के हो ब्रेन ट्यूमर ? यसबाट कसरी बच्ने ? न्युरोलोजिष्ट डा. अनिसमान सिंहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
ब्रेन ट्यूमर भनेको के हो ?
ब्रेन ट्युमर कति प्रकारको हुन्छ ?
ब्रेन ट्युमरलाई ४ वटा ग्रेडमा छुट्याइएको छ । जति ढिला हुँदै वा ग्रेड बढ्दै जान्छ । उत्तिनै ट्युमर नराम्रो हुँदै जान्छ । पहिलो र दोस्रो ग्रेडको ट्युमरलाई त्यति भयावह मानिँदैन । भने, तेस्रो र चौथो ग्रेड निकै नराम्रो हो अर्थात क्यान्सरमा रुपान्तरित भएको हुन्छ । ग्रेड अनुसार यसको उपचार पद्धति अबलम्बन गरिन्छ ।
ब्रेन ट्यूमर हुने कारणहरु के के हुन ?
यो धेरै किसिमका हुन्छन् । ब्रेन ट्यूमर यहि मात्र कारणले हुन्छ भन्ने छैन । धेरै कारणले हुन्छ । प्रदुषित वातावरण,वंशाणुगत गुण,विकिरणहरुमा बढी बस्नाले पनि ब्रेन ट्युमर हुनसक्छ ।
ब्रेन ट्यूमरका लक्षणहरु के कस्ता देखापर्छन् ?
ब्रेन ट्युमरका लक्षणहरु कुन प्रकारको ट्यूमर भएको हो , र व्यक्तिको शारीरिक अवस्था कस्तो छ, सो हेरी लक्षणहरु देखिन सक्छ । सामान्यतया बान्ता हुनु, टाउको दुख्नु , बेचैन हुनु, आलस्य हुनु, खाना अपच हुनु, हर्मोनको गडबडीका कारण महिलामा महिनावारी गडबडी ,पुरुषमा यौनजन्य रोगहरु देखिन्छ । ट्युमर भएको धेरै समय भए प्यारालाइसिस् हुने, छारेरोग जस्ता लक्षण देखा पर्छ ।
ब्रेन ट्यूमरको उपचार कसरी गरिन्छ ?
ब्रेन ट्यूमरबाट कसरी बच्ने ?
Last modified on 2018-05-25 07:41:34
Neurosurgeon & Neurologist